Ahoana ny fomba hampitomboana ny dokambarotra PPC ROAS ao anatin'ny 5 minitra miaraka amin'ny Google Analytics | Martech Zone
Efa nampiasa ny angona Google Analytics ve ianao hanatsarana ny valin'ny fampielezan-kevitr'i AdWords? Raha tsy izany dia tsy ampy amin'ny iray amin'ireo fitaovana manampy indrindra amin'ny Internet ianao! Raha ny marina, am-polony ny tatitra azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana angon-drakitra, ary azonao ampiasaina ireo tatitra ireo hanatsarana ny fampielezan-kevitra PPC manerana ny solaitrabe.
Mampiasa ny Google Analytics hanatsarana ny Miverina amin'ny fandaniana doka (ROAS) dia mihevitra daholo, mazava ho azy, manana ny AdWords anao ianao, ary ny Kaonty Google Analytics dia voarindra tsara ary ny "Tanjona" sy ny "Fanaraha-maso ny fanovana ecommerce" dia miasa.
Midira ao amin'ny kaonty Google Analytics anao. Tsindrio eo Fahazoana> AdWords> Fanentanana. Tsindrio ny fampiasana ny tranokala dia ho hitanao ireto valin'ny metric ireto: Fotoam-pivoriana, Fijerena pejy, fotoana maharitra, fotoam-pivoriana vaovao, tahan'ny fihenam-bidy, famitana tanjona ary fidiram-bola.
Tao anatin'ny dimy minitra fotsiny dia afaka mahita zavatra dimy ianao izay hampivoatra ny fampielezan-kevitr'i PPC tsy misy valiny tsotra fotsiny:
Fivoriana - Ny maody maody dia hampiseho aminao ny Session Total amin'ny tranokalanao, fa azonao atao koa ny mijery ny fitsidihana nitaoman'ny PPC ny tranokalanao. Ny PPC, ao amin'ity boaty ity, dia 1.81% fotsiny amin'ny session rehetra, noho ny vola kely fandaniana. Ny Sents isan-jato dia ho lasa benchmark anao amin'ny fomba handrefesana ny fahombiazanao amin'ny fampielezana.
Faharetan'ny fivoriana - Ny salanisan'ny faharetan'ny fotoam-pivoriana amin'ny tranonkala dia 2:46 (ho an'ny karama) vs. 3:18. Tsy mahazatra ny fifamoivoizan'ny PPC raha manana salan'isan'ny Sesi-potoana ambany kokoa, indrindra amin'ny pejy fitokanana natokana ho an'ny tranokala, fa ny tanjona dia ny hampiakatra ireo mpitsidika rehetra ireo farafahakeliny telo minitra isaky ny fotoam-pivoriana. Ny fanatsarana ity Duration Session ity dia mety ho lasa Tanjona.
Taham-pamoahana - Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia matetika ambony amin'ny pejy fitokanana PPC voatokana satria pejy tokana izy ireo. Izahay dia tsy misafidy ny hikorontana na oviana na oviana, raha tsy hoe hitan'izy ireo miakatra mihoatra ny 80%. Eto, dia hitantsika fa ny 28% ka hatramin'ny 68% dia ny tahan'ny fanoherana. Azonao atao ny misafidy ny manamarina ny Tabs Device eo amin'ny zoro havia ambony, ary mariho fa amin'ny karazana fitaovana rehetra (Desktop, Mobile, ary Tablet) dia ao anatin'ny elanelam-potoana mahazatra ireo isa ireo. Ankehitriny, hijery ny doka isika Safidy vondrona, ary aza mahita olana lehibe.
Famitana tanjona - Na dia mitentina 1.81% amin'ny totalin'ny Session aza ny fampielezan-kevitray, dia mamorona 1.72% fotsiny amin'ny totalin'ny tanjona kendrena (mitarika + fifanakalozana). Raha ny tokony ho izy, io fihinana io dia hitoviana amin'ny isan-jaton'ny Sesien, izay azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny famaranana ny tanjona hatramin'ny 10.2%. Ny fanatsarana ny laharam-pahamehana amin'ny famitana tanjona dia azo ampiana ho tanjona hafa.
Vola miditra - Ny vaovao tsara amin'ity fampielezan-kevitra ity dia 1.81% amin'ny fitsidihana ihany no manome 6.87% amin'ny vola miditra rehetra. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Saingy alohan'ny hampiakaranao izany teti-bola izany dia makà minitra iray hanombanana ny fahombiazan'ny ROI sy ny Margin. Ny fijerena ireo isa ireo dia hanome anao valiny hentitra kokoa momba ny fampitomboana na tsia… fa tsy manam-potoana hiresahana izany rehetra izany amin'ny lahatsoratra iray izahay!
Tao anatin'ny dimy minitra fotsiny dia nanaiky ny tanjona telo hanatsarana isika:
Mampitombo ny Faharetan'ny fivoriana hatramin'ny 3:00 isaky ny pejy.
Fanatsarana ny Famaritana ny famitana tanjona amin'ny tanjona (tsara ny metatra Ecommerce, ary ny valiny dia manondro fa ny fanatsarana ny fiovam-po ho an'ny programa Lead Gen dia toerana mety hanombohana)
Famakafakana ny ROI sy Margin metrika handraisana fanapahan-kevitra bebe kokoa amin'ny fanabeazana sy tsy dia mampidi-doza amin'ny fampiakarana tetibola amin'ny fampielezan-kevitra PPC.
Azafady azafady azafady fa ny fisian'ny tranokalanao dia tsy mitovy amin'ny anay, ary ny traikefa rehetra dia tsy manam-paharoa. Mety tsy hitovy amin'ny anay ny valinao, fa ireo fitaovana ireo dia hanampy anao handinika ireo valiny ireo, na inona na inona isa.
Tianay ihany koa ny manolotra fanampiana anao amin'ny fanatsarana ny tanjona kendrenao mandritra ny fotoananao dimy minitra. Ireto misy fomba tsotra vitsivitsy ahafahanao mamadika ireo Tanjona ireo ho zava-misy ary manampy ny fampielezan-kevitra PPC hahazo ROI lehibe kokoa nefa tsy hampiakarana ny teti-bolanao mihoatra izay zakanao.
Hatsarao ny faharetan'ny fivoriana
Voalohany, hiverina any isika Loharano fifamoivoizana> Doka> AdWords.
Manaraka izany, mijery ny zava-bitantsika amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra. Amin'ireo fampielezan-kevitra miisa dimy ataonay, ny roa dia manana Durations Session Sasa mihoatra ny 3:30. Noho izany, hifantoka amin'ny telo ambiny isika.
Manana vondrona doka 40 izahay, ary ny 10 amin'izy ireo dia maharitra Durasiôna Session <2:00.
Under AdWords> Teny lakile, mandamina araka ny faharetan'ny fotoana maharitra izahay, ary mahita teny lakile miisa 36 miaraka am-pivoriana salanisa <1:00.
Alohan'ny hanombohantsika mamono Keywords, andao jerena ny fahombiazan'ny Keyword Positions.
Misafidiana teny lakile ary apetraho ny refy faharoa ho an'ny faharetan'ny fotoam-pivoriana.
Fakafakao ny valiny.
Amin'ity ohatra ity, ny Keyword izay nosafidintsika dia mahavita tsara manerana ny solaitrabe:
Top 1 - 02:38 (Toerana 1)
Top 2 - 07:43 (Toerana 2)
Top 3 - 05:08 (Toerana 3)
Ny toeran'ny doka mahazatra eto aminay ho an'ny teny fanalahidy - isaky ny AdWords - dia 2.7, ka efa mamely ny toerana mamy ho azy izahay. Na izany aza, raha toa ka ambony noho ny 2.0 (1.0 hatramin'ny 1.9) ny salan'isan'ny Adinay, dia handinika ny fampidinana ny Max CPC Bid izahay ka hidina any amin'ny toeran'ny Ad avo lenta.
Ny fahombiazan'ny Keywords hafa dia mety hanome soso-kevitra ny fiakaran'ny bidin'ny Max CPC raha mafy orina amin'ny toeran'ny doka tsara kokoa ny asany.
Ny teny lakile sasany dia mazava fa mendrika ny "fisotroan-dronono", ary hiato na hamafana azy ireo amin'ny kaonty AdWords izahay.
Eo ambanin'ny Taban'ny Daypart dia hitantsika ireto manaraka ireto:
4 maraina - 00:39
5 maraina - 00:43
6 maraina - 00:20
Miorina amin'ireto valiny ireto dia mandeha any amin'ny kaonty AdWords izahay hanitsiana ny fandaharam-potoanan'ny doka mba hahazoana antoka fa tsy mandeha eo anelanelan'ny amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 7 maraina ny doka ataonay.
Alohan'ny hiatoana ireo vondrona dokambarotra dia mila mandinika ny pejin-tsorinay izahay raha te hanana atiny kalitao. Ny kalitaon'ny atiny dia tena ilaina amin'ny fahombiazana.
Fantaro sy havaozy na esory ny atiny izay mampieritreritra, tsy marina, tsy marina na lany andro.
Mametraha fanontaniana raha ilaina ny atiny manokana.
Andramo ny atiny hahazoana antoka fa afaka manaraka mora foana ny torolàlana ny mpitsidika sy mamita ny hetsika tiana.
Hatsarao ny mason-tsivana amin'ny metrika tsy mahomby.
Mamolavola fenitra farafaharatsiny farafaharatsiny ary avereno jerena na hamao izay atiny tsy dia tontosa.
Mamorona pejy fitobiana vaovao hampifanarahana tsara kokoa ny fikarohana momba ny karoka, ny atin'ny doka ary ny atiny fizarana.
Ary farany, ny Pejy fitobiana misy antsika ankehitriny dia tsy manasongadina horonantsary, ary hiziriziry izahay fa tsy maintsy ampiana (etsy ambany kokoa eo ambanin'ny fanamafisan'ny fanovana).
Miorina amin'ny zavatra hitanay nandritra ny famakafakana voalohany, dia tapa-kevitra izahay fa ny ampahany Gen Gen an'ny programa dia eo am-panatanterahana. Ny tanjonay akaiky dia ny hampisondrotra ny tahan'ny fiovam-po an'ny Gen Gen mihoatra ny 10%. Eto no hanombohana (amin'ny tranokala sy ao anatin'ny kaonty AdWords)
Fanombanana ny pejinay fitobiana. Aiza no andefasantsika olona? Handeha ireo mpampiasa raha tsy mahita avy hatrany izay tadiaviny na ilainy.
Efa nofaritantsika mazava tsara ve hoe inona ny orinasantsika?
Moa ve isika manasongadina ny vahaolana momba ny vokatra na serivisy fa tsy ny fiasa?
Manana atiny miavaka amin'ny vokatra na serivisy tsy hita ao amin'ny tranokala mpifaninana ve izahay?
Mangataka fanazavana be loatra ve isika?
Manana horonantsary amin'ny pejy fitodiana ve izahay? Raha tsy izany dia te hanampy izahay. Amin'ny zavatra niainantsika, ny fisian'i Manome fiakarana eo anelanelan'ny 20% -25% amin'ny vidin'ny fiovam-po ny horonan-tsary, na tena mpampiasa Jereo azy ireo na tsia!
Raha tsy manana pejy fitodiana PPC natokana izahay, moa ve mandefa mpampiasa amin'ny pejin-tranonkala mifandraika misy izay misy fampahalalana tena ilaina sy marina indrindra momba ny vokatra na tombontsoa tadiavin'izy ireo?
Inona no atolotray? Ahoana ny fomba fiasa tena izy? Vao haingana izahay no nanandrana nanolotra Demo na Fitsapana iray, ary ny fanandramana dia nanolotra mihoatra ny 100% ny Demo. Mbola ratsy kokoa noho izany, ny Sales Direct dia nilatsaka 75% tamin'ireo mpampiasa nanatrika ny tolotra Demo. Samy nijaly ny Volume Volume sy ny vola miditra.
Manana antso miantso mahery vaika ve isika?
Efa nanao izay rehetra azontsika atao ve isika mba hamaritana mialoha ireo prospect na hisakanana ireo tsy irina? Ohatra, maro amin'ireo mpanjifanay no tototry ny fangatahana asa «Contacts». Nahitsy izany tamin'ny alàlan'ny fampiasana Keywords Negative amin'ny fampielezan-kevitray hamintinana ny fangatahana toy izany (sy ny fandaniambola mandany).
Mamorona na manova ny doka doka hanatsarana ny fahombiazan'ny doka.
Avereno jerena ny tahan'ny fiovam-po ho an'ny teny lakile rehetra. Misotro ronono ireo izay manao fampisehoana faran'izay ambany farafahakeliny (TBD).
Aiza ary nahoana ny mpitsidika no miala amin'ny fantsom-pivoarana ho an'ny tanjona?
Fanombanana ny tetibola
Nandritra ny fanadihadianay 5-minitra, hitanay fa ny PPC dia nanao ny loharanom-pahalalana hafa rehetra mikasika ny isan-jaton'ny varotra tanteraka vs. isan-jaton'ny fivezivezena tanteraka. Ankehitriny, miverina amin'ny Google Analytics izahay hanamarina ny fiakaran'ny tetibola PPC.
Ho an'ity fanadihadiana ity dia niditra tao amin'ny kaonty Google Analytics izahay ary nitety Fiovam-po> Attribution ary eo ambanin'ny Type, safidio AdWords. Ny fametrahana Default dia ny fifandraisana farany ary ny refy voalohany dia ny fampielezan-kevitra.
Ity fahitana ity dia manome antsika angon-drakitra momba ny fampielezan-kevitra, fandaniam-bola, fiovam-pifaneraserana farany, CPA fifanakalozana farany, lanjan'entana farany, ary fandaniana amin'ny fandaniana amin'ny doka (ROAS).
Misy antony roa lehibe tsy maintsy tadidintsika alohan'ny handrosoantsika. Amin'ity ohatra ity dia manana sisin-tany maivana ny orinasa ary mila manana ROAS 1,000 10% (1 hatramin'ny XNUMX ROI) hahazoana tombony ary miasa amin'ny Tetibola kely, izay manome fotoana ahafahana mitombo.
Raha atao indray mipi-maso dia mahita ny iray amin'ireo fanentanana dimy miaraka amin'ny ROAS> 1,000%. Manaraka izany, miroso amin'ny fahitana ny zava-bitan'ny vondrona Ad izahay, ary mahita Vondrona doka telo misy ROAS eo anelanelan'ny 2,160% sy ny 8,445 XNUMX%.
Fanentanana faharoa sy vondrona Ad fahatelo no miasa miaraka amin'ny ROAS> 800%.
Azontsika atao ny mamely ny tanjona ROAS TANANA 1,000% amin'ny fanentanana faharoa amin'ny alàlan'ny fampandehanana vondrona Ad iray na maromaro. Ny fanentanana hafa dia efa mahavita + 38% vs. tanjona. Azontsika atao ny manolotra am-pahatokisana ny fampiakarana ny Tetibola isam-bolana amin'ny fampielezan-kevitra roa.
Vondrona doka telo no tsy misy idiran'ny fampisondrotana ny tetibola; ny fahefatra dia afaka miakatra amin'ny lisitray aorian'ny fanatsarana (vonoy ny lisitry ny Keyword na Product tsy mahomby).
Na dia tsy azo antoka aza ny fahombiazana, dia heverinay fa ny fiakarana 50% amin'ny fandaniana dia hiteraka fidiram-bola mifanaraka amin'izany, izay rehetra hodinihina. Amin'ity tranga ity, isaky ny $ 700 fanampiny amin'ny fandaniana kendrena, dia manantena izahay fa hahita fiakarana $ 11,935 amin'ny vola miditra!
Maninona Izany rehetra izany no zava-dehibe
Amin'ny maha mpitantana SEM anao dia tsy mifarana ny asanao rehefa mitondra fifamoivoizana amin'ny tranokala ianao; vao manomboka io.
Mandrosoa ao amin'ny kaonty Google Analytics anao, atombohy amin'ny tatitra iray, ary jereo hoe ohatrinona ny zavatra azonao atao ao anatin'ny dimy minitra fotsiny. Alao an-tsaina ange toa izay ho hitanao rehefa mijery ireo tatitra am-polony hafa azonao atao ny mamakafaka!
Tags: tanjon'ny analyticsAttributionbounce ratefampielezan-kevitrafanarahana ny fanovanafanaraha-maso ny fanovana ecommercefiantraikany mandrakizayFamitana tanjonaGoogle Analyticsfanaraha-maso ny fiovam-po google analyticstanjon'ny analytics googleFiovam-pifandraisana faranyCPA fifanakalozana faranyNy sandan'ny fifandraisana faranyfitsidihana vaovaopejy fahitanafikarohana karamampitantana karama isaky ny kitihoppcmpitantana ppcmiverina amin'ny fandaniana dokaFidiram-bolaroasSearch Engine Marketing Managermandanyfaharetan'ny fitsidihanamitsidika
Inona no atao hoe tolotra ora tena izy (RTB)?
Sep 15, 2015 amin'ny 11: 48 AM
Salama Chris, fampahalalana mahaliana ity, saingy toa somary lany andro satria nanova ny voambolana avy amin'ny fampiasanao tamin'ny 2013 i Google. http://marketingland.com/google-changes-menu-options-adds-new-reports-in-google-analytics-61060 Ohatra, novain'izy ireo ny "Loharanom-pifamoivoizana" ho "Acquisite" ary ny "Fitsidihana" dia "Session" ankehitriny.
Ary koa, ny lalanao: Loharano fifamoivoizana> Doka> AdWords> Fanentanana
Izao dia izao: Fandraisana> AdWords> Fanentanana
Ary, ny pikantsary voalohany asehonao dia hafa ihany koa ankehitriny… Tsy mahazo Faharetan'ny Session intsony ianao eo amin'io efijery io. Ny fomba iray ahazoana azy io izao dia ny mankany amin'ny Acquisite> All Traffic> Source / Medium ary avy eo sivana amin'ny CPC.
Tena fampahalalana tena tsara izy io, saingy mety ho tsara ny mahita an'ity miaraka amin'ny pikantsary, dingana ary data.
Misaotra amin'ny fahitanao!
Sep 17, 2015 ao amin'ny 12: PM PM
Misaotra Mark! Nandefa ny kopia sy pikantsary nohavaozina tamiko i Chris ary navoakanay indray ny lahatsoratra.